Kuboshwe onesibhamu esingekho emthethweni | News24
Kuboshwe onesibhamu esingekho emthethweni
isithombe: sithunyelwe Isibhamu esingekho emthethweni esiwuhlobo lwe-38 revolver esitholakale kumlisa wase-Summerveld, ngoLwesithathu mhla ka-15 kuMbasa (April)
AMAPHOYISA ase-Hillcrest abophe umsolwa oneminyaka engama-37 ubudala, emva ngokutholwa nesibhamu esingekho emthethweni.
Okhulumela amaphoyisa ase Hillcrest ngaphansi komnyango wezoku Xhumanisa, uConstable Ndumiso Manqele, uthe lo mlisa uboshwe ngezikhathi zawo 3 ekuseni.
Amaphoyisa athole umbiko ngesikhathi ethungatha izigebengu ezifunelwa amanye amacala.
Uthe: “Ngesikhathi amaphoyisa ebheka lezigebengu, athole umbiko ngomlisa ogcine isibhamu ngokungemthetho. Abaseshi balandele lo mkhondo obaholele endaweni yase Summerveld lapho kuhlala khona lo msolwa. Amaphoyisa athole isibhamu esiwuhlobo lwe-38 revolver onezinhlamvu, kodwa i-serial number isusiwe,” kusho yena.
Umsolwa uvulelwe icala lokugcina isibhamu esingekho emthethweni. Lesi bhamu sizohlolwa ngocwepheshe ukuze kutholakale ukuthi asikaze yini sitshenziswe kwamanye amacala enzeke kule sifunda saKwaZulu–Natal. Umsolwa uvele kafushane enkantolo yeMantshu ePinetown ngoLwesithathu mhla ka-15 kuMbasa (April)